Nuki, qufulka casriga ah ee la jaan qaadaya HomeKit | Wararka IPhone
Nuki, qufulka casriga ah ee la jaan qaadaya HomeKit
Luis Padilla | | Qalabka IPhone, HomeKit, dhowr
Qufulka Smart wuxuu si tartiib tartiib ah u gaarayaa otomaatiga guryaha ee guryaheena, laakiin waxay la kulmayaan diidmo badan dhanka dadka isticmaala sababo la xiriira shaki xagga amniga ah, cabsi laga qabo rakibo qalafsan iyo, wixii ka sarreeya oo dhan, cilladaha ay ka dhigan tahay in la beddelo qufulka asalka gurigaaga. Nuki wuxuu na siiyaa qufulkiisa caqliga badan ee doonaya inuu joojiyo dhibaatooyinkaas oo dhan, tan iyo Waxay leedahay amniga ay HomeKit bixiso, rakibideedu waa mid aad u fudud oo sidoo kale waad haysan kartaa qufulkaaga asalka ah, adigoon badalin furaha. Waan tijaabinay wax walbana hoos ayaan ku sharaxeynaa.
Waxaan awoodnay inaan tijaabinno Qalabka dhameystiran oo ka kooban Nuki Smart Lock 2.0 (quful caaqil), Nuki Bridge (buundo) iyo Nuki FOB (kontoroolka fog). Waxa kaliya ee runtii lama huraanka ah waa qufulka caqliga badan, iyo buundada iyo kantaroolaha labaduba waa ikhtiyaari.
2 Buundada Nuki
4 Barnaamijka Nuki
Qufulka xariifka ah ee Nuki wuxuu guriga kuugu keenayaa qalab otomaatig ah adigoon fulin qalab rakibis ah ama bedel qufulkaaga, waana wax guul u ah fekerkeyga. Waa run in qaabkeedu xoogaa ka "qalafsan yahay" noocyada kale, laakiin waa qiimaha ugu yar ee lagu bixiyo raalli ahaanshaha laga bilaabo isla markii aad rakibidda ku dhammeysay kaliya 5 daqiiqo adigoon bedelin furayaasha qoyska oo dhan. Fiidiyowga waxaad ku arki kartaa dhammaan habka rakibidda oo si faahfaahsan loo sharraxay. Marka la rakibo, waxaan ilaalineynaa nidaamka furitaanka gacanta, sida albaab kasta oo caadi ah, laakiin sidoo kale waxaan fursad u lahaan doonnaa isticmaalka iPhone iyo HomeKit., sidaa darteed waxay ku habboon tahay guryahaas ay ku wada nool yihiin kuwa jecel iyo kuwa ka shakisan otomaatiga guriga.
Sanduuqa gudihiisa waxaan ku haysannaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku rakibto albaabkeenna, iyo boggaaga internetka (isku xirka) Waan arki karnaa haddii qufulkeenu uu waafaqsan yahay, wax si weyn loogu taliyay inaad sameyso ka hor intaadan iibsan. Qufulku wuxuu ku xirmaa Bluetooth 5.0 illaa iPhone-keena, kaas oo sida iska cad ay tahay inaan u dhawaano, oo haddii aan rabno inaan ku dhexgalno HomeKit, waxay sidoo kale ku xirmeysaa Apple TV, iPad ama HomePod, oo u noqon doona udub-dhexaadka helitaanka fog Waxay ku shaqaysaa afar baytariyada AA, oo si fudud loo beddeli karo. Waxa kale oo ku jira albaabka furitaanka iyo dareemayaasha xidha.
Waa buundo isku xirta qufulkaaga adoo adeegsanaya Bluetooth iyo shabakaddaada WiFi, taasoo u oggolaaneysa marinka fog ee qufulka iyadoo aan loo baahnayn HomeKit Haddii aad haysatid HomeKit, buundadu muhiim maahan, laakiin waxay ku siineysaa hawlo dheeri ah sida inaad ku ogeysiiso inaad guriga ka tagtay adigoon qufulka furayn. Waxaan u soo koobi karnaa sida haddii aad rabto inaad isticmaasho barnaamijka 'iOS Home app', uma baahnid buundada, laakiin haddii aad rabto inaad isticmaasho barnaamijka Nuki iyo shaqooyinkeeda intaad ka fogeyso qufulka, waad u baahan tahay.
Aaladda kontoroolka ee yar oo kuu oggolaanaysa inaad furto oo aad xiratid qufulka furayaasha la'aan, ku habboon in la siiyo martida ama carruurta iyo furitaanka qufulka iyada oo aan loo baahnayn furayaasha ama taleefanka casriga ah.
Nuki wuxuu na siiyaa dalabkiisa u gaarka ah ee qufulka lagu isticmaalo. Iyada ayaynu ku furi karnaa kuna xidhi karnaa, laakiin sidoo kale waxaynu yeelan doonnaa hawlo kale oo horumarsan, sida karti u lahaanshaha si otomaatig ah u furmo markaad dhowdahay, adiga oo aan farta saarin, u oggolow dadka kale inay si ku-meelgaar ah ama aan la cayimin u furaan, u arkaan qoraalada furitaanka iyo xiridda adeegsadaha, hel ogeysiisyada mar kasta oo albaabka la furo oo la xiro, ama barnaamij qufulka si otomaatig ah u xidho markaad baxdo. Dhammaan shaqooyinkan horumarsan waa waxa buundada Nuki loogu talagalay.
Hawlgalka codsigu waa mid caqli gal ah, isla marka aad dhex marto waxaad awoodi doontaa inaad u qaabeyso sidaad u jeceshahay adoo adeegsanaya howlaha aad rabto inaad adeegsato, oo aad ka joojiso kuwa aadan sameyn. Jawaabta qufulku waa dhakhso, inkasta oo ay tahay inaad sugto inta mootadu furayso albaabka, kaas oo qaadanaya ilbiriqsiyo ka dheer haddii aad adigu furahaaga ku samaysay ... ilaa iyo intaad u baahnayn inaad ka soo gudubto boorsadaada ama boorsadaada. Sidoo kale markaad dhamaysid furitaanka qufulka, wuxuu kaloo furayaa "qabsinka" ilbiriqsiyo si albaabku u furmo ama waa inaad riixdo, sidaa darteed haddii aad gacmahaaga buuxsato wax dhibaato ah kuma soo gelayso gelitaanka.
Isdhexgalka barnaamijka Apple waxaa lagu sameeyaa xarumaheeda caadiga ah (Apple TV, HomePod ama iPad). Ku xiritaanka barnaamijka Apple macnaheedu waa awood u lahaanshaha sameynta otomaatiyada ay weheliso qalabka kale, sida waxaad dhahdaa “Habeen wanaagsan” oo nalka oo dhami wuu damiyaa oo qufulka qufulku waa la xidhaa. Calaamadaha NFC si loo furo albaabka loona xiro laydhadhka, u adeegso Siri si aad ugu xakameyso qufulka codkaaga ... dhammaan fursadaha ay HomeKit bixiso waxay ku habboon yihiin Nuki, waana war wanaagsan. Sidoo kale, sidaan soo sheegnay, haddii aad isticmaasho HomeKit uma baahnid buundada marin fog.
Tallaabo dhanka amniga ah, waxaad kaliya ka furi kartaa qufulka Nuki taleefankaaga furan ee iPhone-ka ama Apple Watch-kaaga oo lagu dhejiyay curcurkaaga iyo qufulkiisa. Tani ma ahan kiiska HomePod, oo xiri kara laakiin ma furi karo, maxaa yeelay ma ogaan karo in qofka tilmaamaha bixinaya loo oggol yahay inuu furo albaabka.. Si aad ugu oggolaato dadka kale inay albaabkooda uga furaan taleefankooda iPhone-ka waxaad u baahan tahay oo keliya inaad la wadaagto gurigaaga oo aad iyaga siiso marin.
Dib-u-eegistaan ​​waxaan diirada ku saarnay sida ay ula jaanqaadi karto HomeKit, laakiin Nuki sidoo kale wuxuu la jaan qaadayaa labada kale ee guryaha waaweyn ee otomaatiga u ah, labadaba Amazon Alexa iyo Google Assistant.
Qufulka smart smart ee Nuki wuxuu ku guuleystey inuu ka adkaado cilladaha waaweyn ee moodooyinka kale: rakibid fudud, adigoon beddelin qufulka iyo amniga HomeKit na siinayo. Waxa kale oo aad muhiim u ah in la ogaado in haddii teknolojiyaddu waligeed fashilanto, aad mar walba isticmaali karto habka caadiga ah ee furitaanka gacanta. Hawlgal aad u siman iyo jawaab deg deg ah, iyo fursado badan oo HomeKit na siinayo marka la eego bay'ada iyo otomaatiyada ayaa dhameystiraya qalab kaliya oo la hoos dhigi karo iyadoo ay jirto buuq ama sawaxan marka la furayo ama la xidhayo, wax aan ahayn dhanka kale dhibaato maleh. Qiimuhu wuu ku kala duwan yahay Kitka aan iibsanno:
Nuki Smart Lock 2.0 € 229,95 (isku xirka)
Nuki Smart Lock 2.0 + Nuki Bridge € 299 (isku xirka)
Nuki FOB € 39 (isku xirka)
Rakibaadda fudud adoon badalin qufulka
La jaanqaadi kara HomeKit, Alexa iyo Kaaliyaha Google
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Nuki, qufulka casriga ah ee la jaan qaadaya HomeKit
Octavio Javier dijo
Dibedda ma looga furi karaa fure?
Jawaab Octavio Javier
Haddii ay tahay inaad uga tagto fure silsiladda si ay u shaqeyso, sidee furaha banaanka uga soo gelineysaa haddii uusan shaqeynin.
Taas awgeed bowlerku waa inuu noqdaa mid badbaado leh. Si kale haddii loo dhigo, waxaad ka furan kartaa albaabka banaanka xitaa fure gudaha ah. Muhiim !!!
Felipe vidondo dijo
Qufulkayga waxaan ku haystaa guluub nalkiisu aad u sarreeyo oo haddii aan furaha gudaha ku haysto, ma gelin karaan furaha, ii sheeg fursadda aan ku haysto laambaddan kale. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qufulka oo dhan laga furo banaanka mobilka ama koontaroolka fog, oo ay ku jiraan warqada, mahadsanid, sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay la shaqeeyaan Android iyo iPhone isla waqtigaas
Jawaab Felipe Vidondo
Tayada codka ee AirPods Pro cusub wali ma garaacdo Galaxy Buds, sida laga soo xigtay Warbixinnada Macaamiisha
Maalinle - Apple Watch iyo Arrhythmia Detection